Apho kukho eyona iindawo elondon ukuhlangabezana enye Isitshayina kubekho inkqubela. Ividiyo Dating
ingaba enkulu, imvelaphi ukuba ufuna ukufumana malunga Isitshayina iziganeko okanye gatherings elondon (okanye basically naphi na kwi-US)? Ndine zihlanganisene uluhlu iziganeko kuba kuni. Nje nqakraza eli ikhonkco – Ngoku, ukubonelelwa Isitshayina abantu ukhethe ukuya ngaphesheya ukuphuhlisa, ehlabathini ke enkulu izixeko ziza kuba Chinatown.
Okwesibini, abaninzi Isitshayina girls ukhethe nzulu kwi-Usa, ezifana Yasemanchester Ngezifundo, Cambridge Ngezifundo, Oxford Ngezifundo. Unako kanjalo fumana ezininzi omnye Isitshayina girls kwezi iindawo.
ukuba fumana usetyenziso ukuzama
Ungafumana ezininzi omnye Isitshayina girls ngasentla, ndiyakholwa ukuba akuyi kuhlala mntu kuba kuni. Ngokwengqokelela yamanani, noba Chinatown okanye nayiphi na ngezifundo.
Kukho, Isitshayina abafundi kwi-UK
Abaninzi ingaba elondon, ngaphezu kwesiqingatha ngabo abafazi, kwaye uninzi ingaba omnye. Khangela Kodwa ukuba akunjalo, Isitshayina, mhlawumbi ungakwazi luhlole yakho motivations kuba wanting ukuhlangabezana a Isitshayina umfazi ngokukodwa. Yinto eqhelekileyo kuba abantu”exoticize”okanye fetishize Isitshayina abafazi.
← Eyona Izixeko kwi-China kuba Intlanganiso Enye Abafazi
Dating kwi-China - Isitshayina Dating Bonisa kwaye Iincam →